I-Apple Suite: Ifulethi elinekamelo lokulala eliyi-1: Ilayisensi yebhizinisi # 5405 - I-Airbnb
I-Apple Suite: Ifulethi elinekamelo lokulala eliyi-1: Ilayisensi yebhizinisi # 5405
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Aileen
I-Apple Suite: I-Charming Queen Suite endlini yokuqasha yeholide enamakamelo amane.
I-Apple Suite ingeyesimanjemanje futhi yinhle. Ikhishi, igumbi lokuphumula nendawo yokudlela zihlangene ekamelweni elilodwa, okwenza ukuhlala kuthokomale futhi kube lula . Ikamelo linamathayili, ubhavu wokuzicwilisa onethezekile negumbi lokugezela le-shower.
Ikamelo lisezingeni eliphansi ngakho azikho izitebhisi zokuzulazula. Woza kalula futhi uye engadini enhle ebiyelwe enomthombo, itafula lengadi nezihlalo . kanye nendawo ekhethekile ye-bq etholakalayo unyaka wonke.
I-Apple Suite iyindawo yesimanje, evulekile yohlelo. Le ndawo ingasetshenziswa kalula yizivakashi ezinezinkinga zokuhamba ezilinganiselwe. I-Apple Suite ayinazo izitebhisi futhi isendaweni ephansi. Indawo yokungena idlula emnyango oyinhloko wangaphambili wendlu obanzi ngamayintshi angu-35. Uma usungenile endaweni yokwamukela izivakashi kunomnyango wekhishi le-Apple Suite onamayintshi angu-31 ububanzi. Indawo yokuhlala, yokudlela nekhishi konke kuwuhlelo oluvulekile. Awukho umnyango wekamelo lokulala vele uvule ubuciko bezinkuni zemvelo ukuze uhambahambe. Umnyango oya egumbini lokugezela ungamayintshi angu-29 ububanzi.
I-Apple Suite inetafula layo langaphandle kanye nezihlalo kanye nendawo ye-bq. Igceke langaphambili lihlanganyelwa nelinye ikamelo elingu-1 elinendawo yalo ye-bq deck ngakolunye uhlangothi lwegceke. Enye indawo ehlanganyelwayo yigumbi lokuhlanza izingubo elihlanganyelwa namanye amakamelo angu-3.
Ibanga elilula lokuhamba ngezinyawo ukuya edolobheni. Itholakala phakathi kwe-Perseus Winery (amamitha angu-100) ne-Begin (amakhilomitha angu-1 1/2). Umzila we-KVR (amamitha angu-50)
Izivakashi ezingadluli ku-3.
Indlu ephakathi A/C inikeziwe intwasahlobo
nehlobo. Ikamelo lokulala elihle leNdlovukazi elinendawo ye-closet kanye nefasitela elisha elikhulu elibheke engadini engemuva.
Ikhishi elihlangene elithokomele/indawo yegumbi lokuphumula elinosofa ophinde ube umbhede wosuku, i-TV yesikrini esicaba engu-40 inch, i-wifi, netafula lokhuni olujabulisayo. Ifasitela elisha elikhulu phezu kosinki wasekhishini libheke ingadi yangaphambili, umthombo nezihlahla eziningi ezinhle.
Ikhishi linamapuleti amabili e-induction, uhhavini omncane we-convection, i-microwave, ifriji elikhulu/i-freezer nazo zonke izitsha nezitsha ozidingayo.
Igumbi lokugezela elihle elinamathayili amatshe e-travertine emvelo, ubhavu wengilazi kanye nobhavu wokuzicwilisa.
Ikamelo nendlu ifudunyezwe phakathi nendawo ngegesi yemvelo.
Umshini wokuwasha nokomisa nge-steam ehlanzekile futhi eyomile kuhlanganyelwa namanye amakamelo angu-3 futhi atholakala ephaseji elingaphambili ngaphandle nje komnyango wekamelo le-Apple. $ 2/hlanza; $ 2/ukomisa. Sicela ulethe izinto zakho zokuwasha izingubo.
Indawo yokuhlala esungulwe kahle.
Umzila we-KVR uhamba emgwaqweni ngokufinyelela kwe-Bankview Rd.
I-Perseus wery itholakala ezindlini ezingu-4 empumalanga. Kukhona cishe izindawo zewayini ezingu-30 ezisendleleni eya e-NarTokyo (ngemizuzu engu-15 uma uhamba ngemoto empumalanga)
Indawo yokudlela yaseBhentshi ingamakhilomitha angu-1/2 entshonalanga.
Ibhishi lase-Marina Way lingaphansi kwamakhilomitha angu-1 entshonalanga/enyakatho.
Izindawo zokudlela zasemgwaqweni ongaphambili ne-Main edolobheni zingamakhilomitha angu-1 entshonalanga
Ngivame ukuhlangana nezivakashi lapho zingena bese ngitholakala ngomyalezo/i-imeyili noma ngocingo ngemva kwalokho.